एउटा विद्यार्थी शिक्षक वा नेता बन्ने सपना किन देख्दैन?::Pathivara News
के शिक्षक बिनाको नेपाल अबको नेपाल हुन सक्छ? सवाल शिक्षकको मात्र छैन। किन एउटा विद्यार्थीले भविष्यमा राजनीतिज्ञ भन्छु भन्दैन। यो पनि आजको महत्वपूर्ण प्रश्न हो। के अबको नेपाल राजनीतिज्ञ बिनाको नेपाल हुनसक्छ? यी प्रश्नबारे तपाईं शिक्षकहरुले गम्भीर रुपममा मनन् गर्न जरुरी छ। हामीजस्ता राजनीतिज्ञहरुले यो प्रश्नलाई नजरअन्दाज गरेको खण्डमा त्यसले गम्भीर परिणाम ल्याउने निश्चित छ। त्यसैले यो प्रश्नको जवाफ जरैसम्म पुगेर खोजिनुपर्छ। र यसको समाधान पनि जरैदेखि निकाल्नुपर्छ।
प्लस टु पढ्दै गरेको एउटा विद्यार्थीलाई तिमी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भनेर सोध्दा उसले डाक्टर भन्छ, इञ्जिनियर भन्छ अथवा पाइलट भन्छ। उसले एयर होस्टेस, बिजनेसम्यान, प्रोफेसर, साहित्यकार भन्न सक्छ। तर किन कुनै पनि विद्यार्थीले म भविष्यमा शिक्षक बन्न चाहन्छु भन्दैन? के शिक्षक बिनाको नेपाल अबको नेपाल हुन सक्छ? सवाल शिक्षकको मात्र छैन। किन एउटा विद्यार्थीले भविष्यमा राजनीतिज्ञ भन्छु भन्दैन। यो पनि आजको महत्वपूर्ण प्रश्न हो। के अबको नेपाल राजनीतिज्ञ बिनाको नेपाल हुनसक्छ? यी प्रश्नबारे तपाईं शिक्षकहरुले गम्भीर रुपममा मनन् गर्न जरुरी छ।
कहिलेकाही म इलामका पुण्य गौतम सरलाई सम्झन्छु। उहाँले सुनाएको एउटा कथा मेरो सम्झन्छु। एकचोटी राजनीतिज्ञ र शिक्षक एकसाथ मृत्यु भएर स्वर्ग पुगेछन्। स्वर्गको ढोकामा पुग्नासाथ नगरा बजाएर, फुलमाला अबिर गरेर रथमा चढाएर नेतालाई लगिएछ। शिक्षक त त्यो हुलमा कतै हराए। बाजा बजेको छ, अप्सराहरु नाचेका छन्। वातावरण संगीतमय छ। पुष्पबृष्टि गरिएको छ। शिक्षकको मनमा लागेछ, नेतालाई त्यत्रो स्वागत मलाई किन केही छैन? नेपाल भन्ने देशमा पनि फूलमाला र अबिर नेताले पाउनुपर्ने, स्वर्गमा पनि उनैले पाउने भनेर शिक्षकलाई झोक चलेछ। अाक्राेशित उनी चित्रगुप्त कहाँ पुगेछन्।
‘मबाट के गल्ती भयो महाराज?’ शिक्षकले चित्रगुप्तसँग प्रश्न राखेछन्। ‘हेर, यो नेपालमा जतिपनि शिक्षक मरे प्रायः स्वर्गमै आउँछन्। नर्कमा कोही शिक्षक पनि जाँदैनन्। स्वर्गमा यति शिक्षक आइरहन्छन् कि तिनीहरु स्वागत गर्ने हो भने यहाँ अरु काम केही भ्याइँदैन। तर नेता यहाँ झुक्किएर मात्रै आइपुग्ने हुन्। धेरै उतै नर्कतिर जान्छन्। त्यसैले आएको बेलामा उनलाई प्रोत्साहन गरौं भनेर पुरस्कारस्वरुप स्वागत गरेको सन्देश दिनका यो व्यवस्थापन गरेको हो।’